यस्ताे सम्म हुँदाे रहेछ, दिउसै रात परेपछि……. – Jagaran Nepal
यस्ताे सम्म हुँदाे रहेछ, दिउसै रात परेपछि…….
फतेहपुर शेखावाटीमा अचानक धुलोको आँधीबेहरीले मानिसहरूलाई त्रा’स दियो। धुलोको आँधीबेहरीको कारण अन्धकारले दिनलाई ढाक्यो। दृश्य यस्तो थियो कि त्यहाँ जताततै धूलोको धूलो छ। स्थानीय व्यक्तिहरु भन्छन दिउँसो अचानक तेज बतास चल्न थाल्यो र यो देख्दा धुलोको आँधीबेहरी तीव्र गतिमा सीकर तर्फ बढेको देखियो।
आँधीबेहरीको गतिको यस बवंडरका कारण, सामान्य जीवन विचलित भयो। सवारी चालकहरूले सडकहरूमा सुरक्षित ठाउँहरू देख्न छाडे। उही समयमा, आँधीबेहरी देखेर मानिसहरूले बजारका पसलहरू बन्द गरे। यो देखेर, तुफानले फतेहपुरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। यसको प्रभाव करिब आधा घण्टाको लागि देखियो। यसपछि आँधीबेहरी ढिलो भयो। यसका साथै हल्का वर्षा पनि भएको थियो जसले गर्मीमा राहत पाएको थियो।
छालहरू समुद्री हावामा मरुभूमिको धुलोको आँधीबेहरीको रूपमा हुरी बढ्न थाल्छ। बढ्दो छालहरू आँधीबेहरी बन्छ जब हावाको वेग बढ्छ। उही लाइनहरूमा, मरुभूमिमा चलिरहेको हावाले यहाँ बलौटे समुद्रमा छालहरू बनाउँछ। जब हावाको यो गति कायम राखिन्छ, धूलो कणको मात्रा बढ्दछ र यो धुलो आकाशमा आवरण हुन्छ, बलौटे छालहरू आँधीबेहरी बन्छन्।
तीव्र हावाको साथ अघि बढ्दै, यो धुलो आँधीबेहरीको रूप लिन्छ। यस कारण यो केहि टाढामा पनि हेर्न गाह्रो छ। मरुभूमिमा उदाउने यी बवंडर धेरै गुणा लामो हुन्छन्। यी बवंडरले पार गर्ने धुलो मात्र त्यहाँ देख्न सकिन्छ। धुलो अनुहार र कपडाबाट सबै चीजमा जम्मा हुन्छ। धेरै प्रकाश यो धुलो को सब भन्दा ठूलो सुविधा हो जुन सजीलै खस्छ। तर मानिसहरूलाई धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्दछ।
धेरै जसो मरुभूमि भूमध्यरेखा वरिपरि छ। यस क्षेत्रमा वायुमण्डलीय चाप धेरै नै छ। यो द’बाबले जमिनमा उचाइमा चिसो सुक्खा हावा ल्याउँछ। यस समयमा, सूर्यको प्रत्यक्ष किरणहरूले यस हावाको आर्द्रता नष्ट गर्दछ। यो हावा चर्को हुन्छ ओसको ह्रासको कारण। यस कारणले, त्यहाँ वर्षा छैन र भूमि सुक्खा र तातो हुन्छ।
जमिनको ताप को कारण ओसिलो अभावका कारण, धूलो कणहरूले आफूलाई एकसाथ राख्न असमर्थ छन्। यस्तो अवस्थामा, तिनीहरू हावासँग धेरै सजिलैसँग उठ्न थाल्छन्। हावाको गति चालीस किलोमिटर भन्दा बढी हुँदा यी धूलो कणहरूले तुफानको रूप लिन्छन्। धुलो कणहरू टोरनोडोको साथ दशदेखि पचास फिटको उचाईमा उठ्छन्। कहिलेकाँही तीनिहरु अझ उच्च उचाईमा पुग्छन्। source: aajtak